Fitsarana Avon'i Delhi: Tsy tompon'andraikitra ny mpitantana ny vondrona WhatsApp
Nalaina avy hatrany tamin'ny olana fantatra amin'ny WhatsaApp, ny Fitsarana Avon'i Delhi dia nieritreritra ny fanapahan-kevitra iray izay maneho fa ireo mpiandraikitra ny WhatsApp sy ny olona hafa ho an'ny olona dia tsy azo raisina ho tompon'andraikitra amin'ny fanendrikendrehana ny mpiandraikitra ny serasera, noho ny tsy fahafalian'ny olona manohitra ny fanangonam-baovao Hafatra tsy mendrika.
Navoakan'ny Fitsarana Avon'i Delhi ny filazana fa, "Tsy toy ny tsy nahazoan'ny mpitantana ny fanambarana tsirairay ary tsy afaka navoakan'ny tsirairay avy amin'ny fanangonana tao amin'io sehatra io".
Ny raharaha mifandraika amin'ny fangatahan'ireo Whats App dia navoakan'i Ashish Bahlla, izay mifandray amin'ny orinasam-panjakana iray. Nofintininy ny fanoherana an'i Vishal Dubey izay mazava ho azy fa ny mpanatanteraka ny fivoriana. Nitranga izany raha jerena ny zava-misy, ny mpividy hafa ao amin'ny orinasam-pikarakarana manokana ao Haryana dia nanohy nandefa hafatra tao amin'ny lahateny fanangonana, satria tsy nahazo ny tompony ara-potoana izy ireo ary nandeha lavitra mba hiverina. Hafatra maro izay notarihina mivantana tamin'i Ashish Bhalla, izay nifindra tany amin'ny fitsarana noho ny nanakiana ireo olona mpanangona mba hanivana ny sariny sy hanendrikendrika azy, na dia tsy nokasihiny intsony aza ny ampahany amin'ny trano fandraisam-bahiny.
Nahoana no tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatiny ny mpitantana ny WhatsApp Group?
Ny fitarainana nosoratan'i Ashish Bahlla dia nangataka ny tari-dalana maharitra manohitra ny tsirairay amin'ireo olona ao amin'ny lahateny fanangonan-tsonia amin'ny famoahana azy manoloana ny fahasimbana ara-bola.
Sivily Rajiv Sahai Endlaw, solontenan'ny mpitsara tokana, dia nanilika ilay trangan-javatra mampiahiahy izay nitodihan'ny mpiandraikitra tompon'andraikitra ary nanohy nanambara hoe: "Tsy takatro ny momba ny fomba ahafahan'ny mpitantana fivoriana atao noho ny tsikera, na inona na inona Azo atao izany, amin'ny alalan'ny fanambarana ataon'ny olona iray amin'ny fanangonana. Ny fametrahana mpitantana iray amin'ny sehatra an-tserasera amin'ny resaka fanendrikendrehana dia hitovy amin'ny famoahana ilay mpamoaka ny gazety izay manaparitaka ny lozisialy noho ny fanakianana. "
Nandroso ihany koa izy mba hanondroana fa ny mpitantana iray amin'ny fivoriam-be amin'ny aterineto dia afaka mamporisika fotsiny ny famoahana tsy handefasana zavatra izay manafintohina. Nitsangana i Sahai Endlaw hilaza hoe: "Raha misy dingana ety anaty aterineto natao, ny mpanao azy dia tsy afaka manantena ny iray amin'ireo olom-pireneny mba hankafy tsikera, ary ny fanazavana manjavozavo ataon'ny olona tsirairay avy amin'ny fanangonana dia tsy afaka manao ny" .